Soo Iibso Birta USB Cardioid Studio Condenser Duubista Microphone-ka Laptop - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Birta USB Cardioid Studio Condenser Duubista Mikrofoonka Laptop
$ 63.99 qiimaha joogtada ah $ 79.99
maraakiibta From Shiinaha Russian Federation SPAIN
Color kacay cas madow cagaaran
Shiinaha / casaan cas Ruushka / casaan casaan Shiinaha / madow Xiriirka Ruushka / madow SPAIN / casaan casaan SPAIN / madow Ruushka / cagaaran SPAIN / cagaar Shiinaha / cagaar
Birta USB Cardioid Studio Condenser Duubista Microphone-ka Laptop - Shiinaha / casaan ayuu u kacay gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Qaabka: Miiska dushiisa
Soo-dejiye: Microphone-ka Condenser-ka
Isticmaal: Mikrofoonka Kombiyuutarka
Nooca Deji: Microphone Keliya
Qaababka Polar: Cardioid
Lambarka Moodalka: K669B
Midab: madow / casaan cas
Awoodda korantada: 5V
Heerka Sawaxanka u dhigma: -80DBFS
Saamiga S / N: 78dB
Xilliga korantada: 70mA
Qaabka Polar: Uni-jiho
Jawaabta Soocelinta: 20Hz-20kHz
Nooca: USB mike / kumbuyuutarka mik / kumbuyuutar kumbuyuutar / duubista mike
Ku habboon: toos u socoshada / Duubista qalabka / kulanka khadka tooska ah / istuudiyaha iswada
Bareesada oo ciyaar makarafoonka USB-ga ee kumbuyuutarkaaga ama laptop-kaaga si toos ah ugu xiraya dekedda USB-ga (la shaqee Mac iyo Windows Vista, XP), adoo duubaya miyuusiggaaga ama fiidiyowga adigoon dadaal lahayn. (◆◆ Aan ku habboonayn Xbox iyo Telefoonada ◆◆)
Jidh adag oo qaabeysan oo leh istaag seddex geesood ah ayaa ku imaan doona anfac markasta oo aad sameysid codad ama toos u socodsiinta YouTube.
Makarafoonka wax lagu duubo oo leh mug macaash u heellan ayaa iskiis isu garaacaya, soo saar aad u sarreeya iyo xasaasiyad badan, codkaaga waxaa laga maqli doonaa mid qallafsan oo nadiif ah marka loo isticmaalayo ciyaaraha, samaynta, ama duubista codka.
Makarafoonka PC-ga ee ku shaqeeya USB 5v ayaa u baahan uma baahna 48v tamarta firida ah, oo sahlan in la dejiyo ka hor inta aan la hadlin codka, cod-dhaafka, ama qulqulka qulqulka.
Makarafoonka USB oo leh qaabka wadnaha ee wadnaha loogu talagalay duubista ayaa si cad oo habsami leh u qabanaya codkaaga markii makarafoonka laguu tilmaamo adiga.
Feejignaan: Haddii uu makarafoonku si lama filaan ah u joojiyo shaqada oo uusan soo qaadin dhawaaqa ka dib cusbooneysiinta windows10 ee ugu dambeeyay, fadlan u gudub setinka> asturnaanta> makarafoonka oo u dhig si ay ugu oggolaato barnaamijyadu inay helaan makarafoonka. Fadlan hubi xulashadaada wax soo saar marka dhagahaaga wax maqli karin.
1 * USB Microphone oo leh 5.9 ft USB Cable
1 * Istaagista Birta ee Birta
-43dB ± 3dB (1kHz)
Heerka Sawaxanka u dhigma:
Saamiga S / N:
Sida tayada wax soo saarka. Ansixiyay oo kugula taliyay.
Recomendo a compra, ótimo custo Beneício, ainda mais quando entra em promoção por um preço mais abaixo!
Si dhakhso ah ayaa loo geeyay Daacadnimada sanduuqa sare. U deji sida sharraxaadu tahay. Tayada lacagtaadu waa heer sare. Waxa kaliya ee aanan runtii jecleyn, ama aanan wali fahmin, ayaa ah in makarafoonku qabsado xitaa mugga ugu yar, gabi ahaanba codadka ugu yar. Ie xasaasi ah
Qalab weyn! Si fiican loo xiray! Si fiican u shaqeynaya! Yimid si dhakhso leh!